ChiGerman Modalverben Lecture
Shamwari dzinodiwa, muchidzidzo cheGerman modalverben Tichavhara nyaya yacho. MuchiGerman modalverben kudaidzwa 6 zviito zvekubatsira has. Aya anonzi Modalverbens kana maitiro echiito. Kunyangwe izvi zviito zvekubatsira zvisina musoro zvoga, zvinoshandura kana kuwedzera chirevo chechiito chaicho chechirevo.
German modalverben Aya zviito zvekubatsira, izvo zvinodaidzwa, zvinosunganidzwa maringe nechirevo chiri muchirevo, uye apa, chiito chaicho chechirevo chinowanikwa mune chisingaperi, ndiko kuti, pakupera kwechirevo pasina kusangana.
Aya zviito zvinogona zvakare kushandiswa sechiito chikuru mumutsara. Aya zviito, zvinonzi Modalverben muchiGerman, uye zvadzinoreva zvakajairika uye kusangana kwadzo zvinoenderana nevanhu vari muchizvino zvino zvakapihwa pazasi. Tafura iri pazasi modal modbi Kana ichishandiswa kureva kushuva uye chishuwo, inonyanyo shandiswa se möchten pachinzvimbo chemgengen muhupenyu hwezuva nezuva. Neichi chikonzero, iko kubatanidza kweshoko rekuti möchten, kunze kwemamodhali, zvinopihwa padyo netafura.
Saka zvinoreva chii izvo Modalverben anowedzera kumutsara? Pane here modalverben maitiro echinhu anobatsira muchiTurkey chedu?
Chokwadi chiripo. Saizvozvowo, ngatipei mienzaniso seinotevera:
Ndiri kuda kuenda kumba.
Ndiri kuda kudya keke.
Ndinogona kushambira mudziva iri.
Ndinogona kugadzirisa mota iyi.
Ndinogona kuchovha bhasikoro.
Ndinogona kumhanya nekukurumidza.
Iwe unogona kushandisa mitsara sezviri pamusoro muchiGerman. modalverben Tinogona kuteedzera mitsara yakagadzirwa tichishandisa.
Zvino ngatidzidze nezvezviito zvekubatsira zvinonzi modalverben muchiGerman uye zvadzinoreva.
chete kubvumidzwa kuita, kugona, kugona, kutsunga, kuva
unokwanisa kukwanisa, kugona, kuziva, kunzwisisa, kugona, kugona, kugona
mogeny kuda, kuda, kuda, kuva anoda, kuda, kushuva, kuva
kufanira ndinofanira kuita, ndinofanira kuita, ndinofanira kuita, ndinofanira / ndinofanira
vawane kukumbirwa kuti uite, kudiwa, kudiwa, unofanirwa / unofanirwa, kutaurwa
wollen kuda, kushuva, kudiwa, kuve mukushaiwa
German modalverben ndokuti, zviito zvekubatsira zviri pamusoro. Sezvauri kuona pano, pane misiyano midiki mune zvinoreva pakati paModalverbens. semuenzaniso chete kukwanisa kuita, kuva nemvumo uye rezinesi rekuzviita, kuva nemvumo, zvinoreva zvakafanana unokwanisa Rinoshandiswa kureva kugona kugona kuita, kuva nesimba uye simba, kuva nehunyanzvi, kugona.
ZVOKUBATSIRA ZVINOENDERANA NEGERMAN MODALVERBEN VANHU
VAKAITA SUNGANO chete unokwanisa mogeny kufanira vawane wollen
ini Chivabvu anogona mag fanira ruboshwe chido
du darfst kannst magst must sollst willst
Er / Sie / on Chivabvu anogona mag fanira ruboshwe chido
wir chete unokwanisa mogeny kufanira vawane wollen
samt kuputa cone mogt musst solt zvido
sie chete unokwanisa mogeny kufanira vawane wollen
Aug chete unokwanisa mogeny kufanira vawane wollen
Mutafura iri pamusoro apa modalverbenIwo pfuti dzevanhu dzinopihwa. Kuti ushandise modalverbens nemazvo mumitsara, modalverbenIzvo zvinodikanwa kubata nemusoro kupfura kwevanhu zvinoenderana nevanhu. Isu tinogona zvakare kuona iyi tafura seyakakura yekuona:
ChiGerman Modalverbens akafanana pamusoro. Aya maModalbensens anonyanya kushandiswa mumitsara nechiito chikuru. Modalverbens mumitsara vanokwezvwa nenyaya yacho uye mune iyi nyaya chiito chaicho chemutsara mukusingaperi zvinoti pasina kupfura inowanikwa pamagumo emutsara. Modalverbens inogona zvakare kushandiswa sechiito chikuru mumutsara. Muchiitiko ichi, ivo vanowanzo kuve kunowanikwa izwi rechiito.
Pamusoro modalverben Isu takapa kubatana, saka kana tichizoshandisa modalverben uye chiito chaicho muchirevo, muchirevo zvese modalverben Uye kana chiito chechokwadi chikawanikwa, Modalverben anozobatanidzwa maererano nemusoro wenyaya, uye izwi rechiito chairo richange riri kumagumo kwechirevo sekusingaperi pasina inflection. Isu tatoona kuti chimiro chisina magumo chechiito cheGerman ndechei uye kuti chiito chinogadziridzwa sei muchiGerman zvinoenderana nevanhu, muchidzidzo chedu chechiGerman chekubatanidza. Avo vasingazive vanogona kuverenga chidzidzo ichocho.
Iye zvino ngatinyororei mimwe mienzaniso mitsara muchiGerman zvinoenderana netsananguro dzedu.
ChiGerman Modalverben Sample Mitsara
Ngatinyorai mitsara yakatwasuka tichishandisa modalverben
SUBJECT + MODALVERB + ZVIMWE ZVINHU + CHINANGWA CHOKUTANGA (MUNZIRA YA MASTER)
Meryem anogona kumhanya.
Ngatinyorai mibvunzo yemibvunzo tichishandisa Modalverben
Ndinogona kushambira here?
Unogona kushambira here?
Ahmet anogona kumhanya here?
Tinogona kumhanya here?
Ngatinyorai mitsara yakaipa tichishandisa Modalverben
Iwe haugone kushambira.
Mehmet haigone kumhanya.
Mitsara yakavhenganiswa nezveModalverben
Iye zvino ngatiitei mitsara yakavhenganiswa, mitsara yedu inogona kuturikirwa muchiTurkey seyakaitika kana yazvino. Semuyenzaniso ich kann rennen mutongo "ndinogona kumhanya"Sezvo" kana "Ndinogona kumhanyaTinogona kuturikira se ”.
Handidi kunwa kofi.
Iwe unoda kudya pizza here?
Tinoda kuenda kuimba yemitambo.
Ehr möchtet ein Buch lesen.
Unoda kuverenga bhuku.
Ndinogona kupenda zvakanaka.
Mukomana mudumbu Auto fahren.
Anogona kutyaira zvakanaka.
Tinogona kumhanya nekukurumidza.
Iwe hausi nicht schwimmen.
Handigoni kumuka mangwanani-ngwanani.
Du kannst Klavier spielen sin sin.
Unogona kuridza piyano uye kuimba.
Vadiwa shamwari, muchidzidzo chino, takadzidzisa Modalverbens, unova musoro wakakosha muchiGerman, takaona Modalverbens muchiGerman, takadzidza kupfura Modalverbens zvinoenderana nevanhu, modalverben kushandisa mitsara yakatwasuka, mibvunzo yemibvunzo uye mitsara isina kunaka.
Newewo modalverbenIwe unogona kuita mitsara yakasiyana nezviito zvakasiyana uchishandisa 's.
Nenzira iyi, unogona kudzidza chidzidzo cheModalverben zvirinani uye haungakanganwe zviri nyore chidzidzo cheModalverben nekuda kwekudzokorora kwakawanda.
ChiGerman Modalverben Iwe unogona kunyora chero mibvunzo, maonero, mazano uye zvikumbiro zvaunoda kubvunza pamusoro penyaya iri mundima yemubvunzo. Yese mibvunzo ichapindurwa nesu.
Vadiwa shamwari, musakanganwa kuzivisa uye kukurudzira yedu yeGerman saiti yekufunda kune dzimwe shamwari.
Ndatenda nekushanyira saiti yedu, tinokushuvira zvese zvakanaka.
10th giredhi modalverben10th giredhi modalverben hurukuro11th giredhi modalverben11th giredhi modalverben hurukurogerman modalverben sampuro mitsaraunokwanisaari modalverbModalverben muenzaniso mitsaramogenykufanira